17 Responses to “ရွေးချယ်စရာ”
ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ရင်းနဲ့ သားကို သတိရသွားတယ်။ မိသားစုနဲ့ နေရတဲ့ အချိန်သိပ်နည်းလွန်းလို့ အမေကို စာရေးပြီး ပြောရှာတယ်။ ကြိုးစားလိုက်အုံးမယ် ညီမရယ်။ အတွေးလေးတွေနဲ့ စဉ်းစားမိသွားတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အင်း တွေးစရာလေးတွေရသွားပါတယ်သူငယ်ချင်း ။ အမှန်တော့ မိဘတိုင်းလိုလို မိသားစုအတွက် သီးသန့်အချိန်လေး ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲလေ.. သားသမီးဖက်ကလည်း ဒီတိုင်းပါပဲ မိဘကို ပြုစုလုပ်ကျွေးဖို့ အချိန်လေးရှိတုန်း ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ် ။
သားသမီးတွေအတွက် ဖခင်တစ်ယောက် ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ ဥစ္စာတွေ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀မှာ အတူတကွ ပျော်ရွင် စွာ နေရမဲ့အချိန်မှာ နေခွင့် ရမသွားတဲ့ အတွက် တကယ်စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်မိပါတယ်. ... မုကာခင်ကမှ စွန့်ခွာ သွားတဲ့ ကျနော်တို့ ရဲ့အဖေ ကို ပိုပြီး သတိရစေတဲ့ ပို့ လေး ဖြစ်သွား စေပါတယ်...
တခုလိုချင်ရင် တခုတော့ ပေးဆပ်ရမယ်တဲ့ ...
ပျော်ရွှင်ဘွယ် မိသားစုဘ၀ဆိုတာကတော့ ပြန်လည်ဖန်တီးရယူလို့မရဘူးဆိုတာ ဒီပို့စ်လေးကပြောနေသလိုပါပဲချောရေ..။ ဆင်ခြင်စရာပါနော်။
Saung Yune La said...
Very good. This isagreat heart touching short noble.
အချိန်နဲ့ မိသားစု ရဲ့ ပြဿနာက အခုခေတ်မှာ ပိုများများလာတယ်။
မိဘဘက်ကကြည့်လည်း မှန်နေတာပဲ ၊ သားသမီးဘက်ကလည်း လိုချင်ရှာမှာပဲ။
အဖြေထုတ်မရတဲ့ ပြဿနာတွေက များများလာတယ်နော်
လက်ရှိ အချိန်က အကောင်းဆုံးပါပဲ..။
မိသားစုဘ၀ကို မြင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း မိသားစုနဲ့ ကင်းကွာလာရတာ ဖတ်ရတိုင်း ရင်နာမိတယ်..။
ပိုစ်လေးက ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ချောက စာရေးလည်းကောင်းတယ်နော်။ ပထမဆုံးရောက်ဖူးပေမယ့် တကယ် သဘောကျသွားတယ်။ နောက်လည်း ဒါမျိုးများများရေးပါဦး..
ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား said...
တာဝန်ကျေအောင် သူ့အမြင်နဲ့သူ ကြိုးစားထမ်းဆောင်သွားတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်အတွက် အပ်နှင်းလိုက်တဲ့ ဆုက သေခြင်းတရားတဲ့လားဗျာ..........
မမရေ...ဘယ်သူမဆို မိသားစုနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်ကြတာချည်းပါပဲ...ဒါပေမယ့်လည်းပေါ့လေ... :(
မိသားစုနှင့်အတူတူနေချင်ပေမဲ့ မိဘနှစ်ပါးလုံး မရှိကြလေတော့ မိဘရှိတဲ့သူတွေကိုဘဲ အားကျနေမိပါတော့တယ်။ မိသားစုအသိုက်အ၀န်းရှိကြသူတိုင်း အလုပ်တွေနဲ့ဘဲ နပန်းလုံးမနေဘဲ အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ခါလောက်တော့ မိသားစု ပျော်ပွဲစားလေး အတူတူထွက်သင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ပြီးတော့ မိသားစုအားလုံး အခွင့်ရှိတုန်းမှာ အတူတူနွေးနွေးထွေးထွေးနေဖို့လဲ အလွန်လိုအပ်ပါတယ်။
Ur post gave me different kind of feeling.
Life is too short, we can't know what happen after ....
so everyone should live peace and happy life...
and as possible as we should help other...